ओली सरकारका मन्त्रीहरुमा योगेशले देखाएको आस - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
ओली सरकारका मन्त्रीहरुमा योगेशले देखाएको आस
२०७७ भाद्र २५, बिहीबार ०६:५७:००
काठमाडाैँ-संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बुधबार हिमाली, पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा उपलब्ध गराउन आन्तरिक उडानका लागि हवाइ जहाज खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएका छन् ।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र विभागीय प्रमुखहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाई मन्त्री भट्टराईले आन्तरिकतर्फ दुईवटा मात्र टुइन अटर जहाज भएको र त्ससले माग धान्न नसेको, साथै दुर्गम क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न नसक्ने भएको बताउँदै तत्काल नयाँ खरिद गर्न भनेका हुन् ।
हुन पनि अहिले विमान खरिदका लागि एकदम उपयुक्त समय हो । विश्वभर हवाइ यात्रा सीमित भएकाले विमान खरिद र खपत कम भएको छ । यसले जहाजको मूल्य पनि भारी मात्रामा गिरावट भएको छ । नेपालजस्तो पहाडी भूगोल भएको देशका लागि साना जहाजको आवश्यकता र औचित्य बढी छ । त्यसकारण मूल्य घटेका बेला जहाज किन्न सके दुर्गमका जनताले सेवा सुविधा पाउने, पर्यटनमा टेवा पुग्ने र टाट उल्टिनै लागेको निगमको वित्तीय स्वास्थ्य पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
मन्त्री भट्टराईले निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा लैजाने सोच पनि अघि सारेका छन् । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी खाका तयार गर्न मन्त्रीले भनेका छन् ।
अहिले निगमको जुन हालत भएको छ, कुनै बेला नेपाल टेलिकम पनि यही अवस्थामा पुगेको थियो । सम्पूर्णतः सरकारी स्वामित्वको संस्था हुँदा समयमा सही निर्णय लिन नसक्ने, सरकारी दबाब र प्रभावमा रहनुपर्ने, सरकारले पनि भर्तीकेन्द्र बनाउन खोज्ने, हरेक खरिद प्रक्रिया विवादित हुने लगायत कारणले यस्ता संस्था बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाँदा स्वायत्त प्रकारले चल्ने, आफ्नो व्यावसायिक योजनामा चल्ने र सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने स्थिति आउनेछ । यसले निगमलाई बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नेछ, जसरी नेपाल टेलिकम देशभरमै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाको सूचीमा पर्छ ।
देशका सबैजसो जिल्लामा यसको चलअचल सम्पत्ति भए पनि त्यो त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । त्यसको व्यावसायिक प्रयोग हुन सकेमा पनि निगमलाई आर्थिक टेवा पुग्नेछ ।
मन्त्री भटुटराईले बुधबार भनेअनुसार, विभिन्न २३ ठाँउमा रहेका अचल सम्पत्ति व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउन सकिने देखिन्छ । मन्त्री भट्टराईको निर्देशनलाई निगम व्यवस्थापनले गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने अहिलेजस्तो अवस्थामा धेरै समय रहनुपर्ने छैन ।
मन्त्री भट्टराईको विशेष अग्रसरतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि स्वरुप रातारात फेरिएको छ । सारा सरकारी संयन्त्र लकडाउन र महामारी भनेर हात बाँधेर बसिरहेका बेला भट्टराईले विमानस्थलको स्वरुप परिवर्तन गर्न लगाएका हुन् । त्यस्तै निजगढ विमानस्थलको निर्माणलाई गति दिन पनि मन्त्री भट्टराईले विशेष अग्रसरता देखाएका छन् । मंगलबार मात्र उनले रुख गणना कार्य छिटो सक्न भन्दै अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यस्तै, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा पनि उनले विशेष चासो र पहल गर्ने हो भने चाँडै नै काम सकिनेछ । भैरहवा विमानस्थलको त धेरै काम सकिइसकेकाले चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
अहिले पर्यटक आवागमन ठप्प रहे पनि अबको केही महिनामा परिस्थिति अवश्य बदलिनेछ । त्यसकारण भविष्यलाई हेरेर पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकासमा अहिले तयारी गर्न उचित मौका पनि हो ।
यसले तत्काललाई स्वदेशमा रोजगारी सुनिश्चित हुनेछ भने भविष्यको आर्थिक मेरुदण्ड तयार हुनेछ ।
मन्त्री भट्टराई नेकपाको नेतृत्व पंक्तिमा युवा उत्साह र आमअपेक्षा बढी भएका नेता हुन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका थोरै राम्रा छनोटमध्येमा पर्ने भट्टराईले युवाप्रतिको आशा जगाइराख्न पनि अरुले भन्दा बढी नतिजा दिन सक्नुपर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्म उनले त्यो भावना कायम राखेको देखिन्छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष महामारीका कारण स्थगित भए पनि आउँदा दिनमा हरेक वर्ष भ्रमण वर्ष मनाउन मिल्ने गरी तयारी थाल्ने अवसर हाम्रा सामु छ ।
त्यसतर्फ मन्त्री भट्टराईले अझै बढी लगनशीलता देखाएर संयन्त्र परिचालन गर्न सके देशले नै फाइदा पाउनेछ ।
भट्टराई नेकपाको भावी नेतृत्वका रुपमा समेत हेरिएका नेता हुन् । त्यसैले उनी अहिले ससाना समस्याबाट बहकिने वा भाग्ने गर्नुहुँदैन । उनी हतोत्साहित हुनुपर्ने कारण पनि छैन ।
बरु आफूसँग एउटा विज्ञ टिम बनाएर त्यसका आधारमा अघि बढ्न सके काम परिपक्व हुन सक्छ ।
सडक पूर्वाधारमा वसन्त नेम्वाङले केही नतिजामुखी काम गर्न खोजेको देखिन्छ भने त्यसपछि यो सरकारमा देखाउनलायक नाम योगेश भट्टराई नै हुन् ।
रवीन्द्र अधिकारीको विरासत कायम राख्न पनि उनलाई नतिजामुखी र दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नेबाहेक अर्को छूट छैन ।
लेखक: नारायण दाहाल
सम्पर्क नम्वर: +9779851021550
सिरी ए मा बोलग्नाद्धारा पार्मा ४- १ ले पराजित
अमेरिकी सेरेना विलियम्स फ्रेन्च ओपनको दोस्रो चरणमा
ट्रम्प र बिडेनबिच आज राष्ट्रपति पदका लागि पहिलो आधिकारिक बहस...
आईपीएलमा सन्दीपको टिम दिल्ली र हैदरावाद विच खेल हुने
विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ लाख ९६ हजार ३...
ट्रम्प र बिडेनबिच आज राष्ट्रपति पदका लागि पहिलो आध...
आईपीएलमा सन्दीपको टिम दिल्ली र हैदरावाद विच खेल...
विश्वभर कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ लाख...
नेताहरुले अति गरे, अब कल्याणकारी तानाशाह कि सैनिक शासन ?
युवराज खतिवडाको इसारामा चल्ने कठपुतली अर्थमन्त्रीको खोजीमा ओ...
रचिएका कथाहरूमा रमाउनु आवश्यक छैन, कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक...
कुलमानलाई नै दोहोर्‍याउँदा विद्युत् क्षेत्रमा उधुमै होला र ?
प्रचण्डको शक्ति क्षयीकरण तीब्र, सबभन्दा खतरा न्यायालयबाट
जनरल इन्स्योरेन्सकाे (आइपिओ) मेरो शेयर एपबाट भर्न नमिल्ने